သငျ့ကလေးကို တခွားဘာသာစကား ဘယျလို သငျပေးမလဲ? - Lifestyle Myanmar
ဘာသာစကား နှဈမြိုးတတျဖို့ဆိုတာ မလှယျကူပါဘူး။ ကလေးတှဟော ငယျစဉျဘဝမှာ ဘာသာစကားအတျောမြားမြားကို လှယျလှယျကူကူ လလေ့ာသငျယူနိုငျကွတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မိဘတှကေ ကလေးတှကေို ဘယျလိုသငျပေးရမယျဆိုတာ သခြောမသိကွပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ တခြို့သော အဆငျ့လေးတှကေို လိုကျနာပါက ဒုတိယ ဘာသာစကားကို အလှယျတကူ သငျပေးလို့ရပါတယျ။ ဘာသာစကားနှဈမြိုးတတျတဲ့ ကလေးတှဟော အရှယျရောကျလာတဲ့အခါ ဖွတျထိုးဥာဏျနဲ့ စဉျးစားတှေးချေါမှုပိုငျးမှာ ပိုမိုအားကောငျးတယျလလို့ သုတသေီမြားက ဆိုပါတယျ။
ကလေးကို တခွားဘာသာစကားသငျပေးဖို့ ရိုးရှငျးတဲ့ အကွံပွုခကျြမြား
ကလေးကို ဘာသာစကားအသဈနဲ့ မိတျဆတျဖို့ အလှယျဆုံးနညျးလမျးက သီခငျြးနှငျ့ ထိတှပေ့ေးခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ကလေးတှဟော အပွနျအလှနျ ဆကျသှယျခွငျး၊ နားထောငျခွငျး၊ ကွညျ့ခွငျးဖွငျ့ သငျယူကွပါတယျ။ သီခငျြးဖှငျ့ပေးတဲ့အခါ ကလေးတှဟော ဘာသာစကားရဲ့ အသံနှငျ့ စညျးခကျြကို အကြှမျးတဝငျ ဖွဈလာပါတဘျ။ သီခငျြးနားထောငျခွငျးက သူတို့သငျယူနတေဲ့ ဘာသာစကားရဲ့ အသံ၊ အသံအနိမျ့အမွငျ့ကို သိဖို့ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။ သူတို့ ပထမဆုံး သီခငျြးတှကေို နားမလညျသေးရငျတောငျ သူတို့ရဲ့ အနာဂတျ communication အတှကျ လိုအပျတဲ့ စှမျးရညျမြား ဖှံ့ဖွိုးလာပါလိမျ့မယျ။ တခွားဘာသာစကား သီခငျြးကို ထပျတလဲလဲ ဖှငျ့ပွီး နားထောငျခွငျးက ထိုဘာသာစကားနှငျ့ ရငျးနှီးမှုကို တညျဆောကျပေးပါလိမျ့မယျ။
၂။ စီးရီးတှေ ၊ ဗီဒီယိုတှေ ကွညျ့ခိုငျးတာ
ကလေးကို တခွားဘာသာစကားဖွငျ့ ဗီဒီယိုတှေ၊ တီဗီရှိုးတှေ ကွညျ့စခွေငျးဟာ ဘာသာစကားအသဈတဈခုကို သငျယူဖို့ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ သူတို့နှငျ့အတူ သငျကွညျ့ရှုနိုငျတဲ့ ကလေးပရိုဂရမျတှေ၊ စီးရီးတှပေါဝငျတဲ့ ဒီဗီဒီ တခြို့ကို ရှာဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ဗီဒီယိုမြားမှာ လလေ့ာနညျး နှဈခုပါဝငျပါတယျ။ ကွညျ့ခွငျးနှငျ့ နားထောငျခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ဂီတက တခွားဘာသာစကားကို လလေ့ာဖို့ နညျးလမျးကောငျး ဖွဈသျောလညျး ဗီဒီယိုက ကလေးတှအေတှကျ သူတို့နားထောငျတဲ့ စကားလုံးတှကေို အမွငျအာရုံကိုယျစားပွု ဖျောပွပေးပါတယျ။
၃။ ပုံပွငျမြား ဖတျပွခွငျး
ကလေးတှကေို စာဖတျပွခွငျးက အရမျးအကြိုးရှိတယျဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ သိကွပါတယျ။ နိုငျငံခွားဘာသာစကားကို ဖတျပွခွငျးက ကြှနျတျောတို့ ကလေးတှအေတှကျ စာဖတျခွငျးရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးကို တိုးမွှငျ့စတေဲ့ နောကျထပျနညျးလမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဘာသာစကားရဲ့ ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျပုံနှငျ့ အကြှမျးတဝငျရှိစပေါတယျ။
စကားလုံးတဈလုံးခငျြးစီကို ကွညျ့ခွငျးနဲ့ ဝါကအြပွညျ့အစုံကို ဖတျခွငျးက လုံးဝခွားနားပါတယျ။ ကနဦးအနနေဲ့ မိဘတှကေ ကလေးတှပြေျောမှနေို့ငျတဲ့ ရိုးရိုးရုပျပွစာအုပျတှကေို ရှာဖှပေေးသငျ့ပါတယျ၊ ဘာသာစကား နှဈမြိုးဖွငျ့ ရေးသားထားတဲ့ စာအုပျတှကေလညျး အကွံကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ၊ သူတို့ဟာ တခွားဘာသာစကားပါ ဖတျနိုငျတာကွောငျ့ ပုံပွငျကို နားလညျပါလိမျ့မယျ။
၄။ ကလေးကို တခွားဘာသာစကားသငျပေးဖို့ ကဒျပွားမြားနှငျ့ အလုပျလုပျခွငျး
Flasgcard တှကေိုသုံးတာဟာ ကလေးတှအေတှကျ ပြျောစရာကောငျးသလို ထိရောကျမှုလညျး ရှိပါတယျ။ ကိုယျ့ဘာသာ ဖနျတီးနိုငျသလို ဒီဘာသာစကားကဒျတှကေို ဝယျယူလို့လညျး ရနိုငျပါတယျ။ ကလေးကို တခွားဘာသာစကားသငျတဲ့အခါ နညျးနညျးခငျြး သငျပေးပွီး ကဒျပွားလေးတှကေို တနေ့ လြှငျ အကွိမျအနညျးငယျသာ အသုံးပွုပေးပါ။ ကဒျပွားတှကေ သငျ့ကလေးကို အခွားဘာသာစကားသငျတဲ့အခါ လှယျကူစတေဲ့ နညျးလမျးကောငျးဖွဈပါတယျ။
တခွားနညျးလမျးက စကားလုံး ၁၀လုံးမှ ၁၅လုံးအထိ ရှေးခယျြထားပွီး ကလေးနိုးတဲ့အခြိနျ၊ ဒိုကျပါလဲပေးပွီးခြိနျ၊ ရခြေိုးခြိနျနှငျ့ အခွားသငျ့လြျောတဲ့အခြိနျမှာ ထပျခါထပျခါ ပွောပေးပါ။ ဒီကဒျတှကေို ပွောပွတဲ့အခါတိုငျး စက်ကနျ့ ၃၀ထကျ ပိုမကွာပါနဲ့။
နောကျရှေးခယျြစရာ တဈခုက ကဒျပွားမြားကို အိမျရဲ့ မတူညီတဲ့ နရောတှမှော ကပျထားဖို့ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့အရှကေ့ ဖွတျသှားတဲ့အခါတိုငျး ကလေးကို ပွသသငျပေးနိုငျပါတယျ။
၅။ အခွားလူမြားနှငျ့ လကေ့ငျြ့ပေးပါ
နောကျဆုံးနှငျ့ အရေးအပါဆုံး အဆငျ့က အခွားလူမြားနှငျ့ လကေ့ငျြ့ဖို့ ဖွဈပါတယျ၊ ကလေးတှဟော ထိုဘာသာစကားပွောဆိုတဲ့ အခွားလူမြားနှငျ့ စကားပွောယုံဖွငျ့ ဘာသာစကားအသဈကို သငျယူနိုငျပါတယျ။ အပွနျအလှနျ အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိခွငျးဖွငျ့ သူတို့ဟာ မွနျမွနျဆနျဆနျ စကားပွောနိုငျအောငျ သငျယူပါလိမျ့မယျ။ ကလေးတှဟော အစောပိုငျးအသကျအရှယျမှာ ဖှံ့ဖွိုးမှုအားကောငျးတာကွောငျ့ အားသာခကျြကိုရယူပွီး ဘာသာစကားနှဈမြိုးတတျအောငျ သငျပေးလို့ရပါတယျနျော။
သင့်ကလေးကို တခြားဘာသာစကား ဘယ်လို သင်ပေးမလဲ?
ဘာသာစကား နှစ်မျိုးတတ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ကလေးတွေဟာ ငယ်စဉ်ဘဝမှာ ဘာသာစကားအတော်များများကို လွယ်လွယ်ကူကူ လေ့လာသင်ယူနိုင်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိဘတွေက ကလေးတွေကို ဘယ်လိုသင်ပေးရမယ်ဆိုတာ သေချာမသိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တချို့သော အဆင့်လေးတွေကို လိုက်နာပါက ဒုတိယ ဘာသာစကားကို အလွယ်တကူ သင်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးတတ်တဲ့ ကလေးတွေဟာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပိုင်းမှာ ပိုမိုအားကောင်းတယ်လလို့ သုတေသီများက ဆိုပါတယ်။
ကလေးကို တခြားဘာသာစကားသင်ပေးဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့ အကြံပြုချက်များ
ကလေးကို ဘာသာစကားအသစ်နဲ့ မိတ်ဆတ်ဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းက သီချင်းနှင့် ထိတွေ့ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ နားထောင်ခြင်း၊ ကြည့်ခြင်းဖြင့် သင်ယူကြပါတယ်။ သီချင်းဖွင့်ပေးတဲ့အခါ ကလေးတွေဟာ ဘာသာစကားရဲ့ အသံနှင့် စည်းချက်ကို အကျွမ်းတဝင် ဖြစ်လာပါတဘ်။ သီချင်းနားထောင်ခြင်းက သူတို့သင်ယူနေတဲ့ ဘာသာစကားရဲ့ အသံ၊ အသံအနိမ့်အမြင့်ကို သိဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ ပထမဆုံး သီချင်းတွေကို နားမလည်သေးရင်တောင် သူတို့ရဲ့ အနာဂတ် communication အတွက် လိုအပ်တဲ့ စွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးလာပါလိမ့်မယ်။ တခြားဘာသာစကား သီချင်းကို ထပ်တလဲလဲ ဖွင့်ပြီး နားထောင်ခြင်းက ထိုဘာသာစကားနှင့် ရင်းနှီးမှုကို တည်ဆောက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
၂။ စီးရီးတွေ ၊ ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်ခိုင်းတာ
ကလေးကို တခြားဘာသာစကားဖြင့် ဗီဒီယိုတွေ၊ တီဗီရှိုးတွေ ကြည့်စေခြင်းဟာ ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုကို သင်ယူဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှင့်အတူ သင်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ ကလေးပရိုဂရမ်တွေ၊ စီးရီးတွေပါဝင်တဲ့ ဒီဗီဒီ တချို့ကို ရှာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဗီဒီယိုများမှာ လေ့လာနည်း နှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ ကြည့်ခြင်းနှင့် နားထောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီတက တခြားဘာသာစကားကို လေ့လာဖို့ နည်းလမ်းကောင်း ဖြစ်သော်လည်း ဗီဒီယိုက ကလေးတွေအတွက် သူတို့နားထောင်တဲ့ စကားလုံးတွေကို အမြင်အာရုံကိုယ်စားပြု ဖော်ပြပေးပါတယ်။
၃။ ပုံပြင်များ ဖတ်ပြခြင်း
ကလေးတွေကို စာဖတ်ပြခြင်းက အရမ်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိကြပါတယ်။ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကို ဖတ်ပြခြင်းက ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေအတွက် စာဖတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို တိုးမြှင့်စေတဲ့ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိစေပါတယ်။
စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီကို ကြည့်ခြင်းနဲ့ ဝါကျအပြည့်အစုံကို ဖတ်ခြင်းက လုံးဝခြားနားပါတယ်။ ကနဦးအနေနဲ့ မိဘတွေက ကလေးတွေပျော်မွေ့နိုင်တဲ့ ရိုးရိုးရုပ်ပြစာအုပ်တွေကို ရှာဖွေပေးသင့်ပါတယ်၊ ဘာသာစကား နှစ်မျိုးဖြင့် ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တွေကလည်း အကြံကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ သူတို့ဟာ တခြားဘာသာစကားပါ ဖတ်နိုင်တာကြောင့် ပုံပြင်ကို နားလည်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ ကလေးကို တခြားဘာသာစကားသင်ပေးဖို့ ကဒ်ပြားများနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်း
Flasgcard တွေကိုသုံးတာဟာ ကလေးတွေအတွက် ပျော်စရာကောင်းသလို ထိရောက်မှုလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ဖန်တီးနိုင်သလို ဒီဘာသာစကားကဒ်တွေကို ဝယ်ယူလို့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကို တခြားဘာသာစကားသင်တဲ့အခါ နည်းနည်းချင်း သင်ပေးပြီး ကဒ်ပြားလေးတွေကို တနေ့ လျှင် အကြိမ်အနည်းငယ်သာ အသုံးပြုပေးပါ။ ကဒ်ပြားတွေက သင့်ကလေးကို အခြားဘာသာစကားသင်တဲ့အခါ လွယ်ကူစေတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
တခြားနည်းလမ်းက စကားလုံး ၁၀လုံးမှ ၁၅လုံးအထိ ရွေးချယ်ထားပြီး ကလေးနိုးတဲ့အချိန်၊ ဒိုက်ပါလဲပေးပြီးချိန်၊ ရေချိုးချိန်နှင့် အခြားသင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောပေးပါ။ ဒီကဒ်တွေကို ပြောပြတဲ့အခါတိုင်း စက္ကန့် ၃၀ထက် ပိုမကြာပါနဲ့။
နောက်ရွေးချယ်စရာ တစ်ခုက ကဒ်ပြားများကို အိမ်ရဲ့ မတူညီတဲ့ နေရာတွေမှာ ကပ်ထားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အရှေ့က ဖြတ်သွားတဲ့အခါတိုင်း ကလေးကို ပြသသင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၅။ အခြားလူများနှင့် လေ့ကျင့်ပေးပါ
နောက်ဆုံးနှင့် အရေးအပါဆုံး အဆင့်က အခြားလူများနှင့် လေ့ကျင့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကလေးတွေဟာ ထိုဘာသာစကားပြောဆိုတဲ့ အခြားလူများနှင့် စကားပြောယုံဖြင့် ဘာသာစကားအသစ်ကို သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိခြင်းဖြင့် သူတို့ဟာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် စကားပြောနိုင်အောင် သင်ယူပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေဟာ အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုအားကောင်းတာကြောင့် အားသာချက်ကိုရယူပြီး ဘာသာစကားနှစ်မျိုးတတ်အောင် သင်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။